Arfii kan lakkadda arfii ibsameen walmadaalan deebisa.
Himata: Jijjiiramaawwan lakkoofsaa kanneen gatii ASCII laklamee 8 (0-255) sirrii ykn gatii yuniikoodii laklamee 16 bakka bu'ani dha.
Tartiiba to'annoo addaa gara maxxansaatti ykn madda bahaa birootti erguuf, faankishinii Chr$ tti fayyadami.Mallattoo waraabbii himata diraa keessa galchuufis faankishinii kanatti fayyadamuu ni dandeessa.
REM Fakkeenyi kun mallattoolee waraabbii(gatii ASCII 34) diraa keessa galcha.
REM Qaaqa keessatti maxxansi isaa akka: karaa "short" fakkaata.